Alakamisy fiakaran’i Jesoa any andanitra – 29/05/2014 – Tenin’Andriamanitra – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Tamin’izany andro izany, ny mpianatra iraika ambin’ny folo lahy dia nankany Galilea, any amin’ilay tendrombohitra nasain’i Jesoa halehany. Nony nahita Azy izy ireo, izay nisalasala taloha, dia nitsaoka Azy. Ary i Jesoa nanatona azy ireo ka nilaza taminy hoe: “Efa nomena Ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany; koa mandehana ianareo, mampianara ny firenena rehetra, manaova Batemy azy amin’ny Anaran’ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina; ampianaro izy hitandrina ny zavatra rehetra nandidiako anareo. Ary indro aho eo aminareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny faran’izao tontolo izao”.